Bokin'ny Genesisy - Howling Pixel
Ny tantaran'ny Fiandohana
Ny famoronana ny lanitra sy ny tany (Gen. 1.1 - 4.26)
Ny taranak'i Adama (Gen. 5.1 - 6.8)
I Noa sy ny safodrano (Gen. 6 - 9.28)
ny fanekena teo amin'Andriamanitra sy i Noa ny amin'ny tsy handringanana intsony ny olona amin'ny safodrano, ny famantarana izany dia ny avana;
ny amin'i Noa sy ny ankohonany, ny nahitana voalohay ny divay, ny ozona nahazo an'i Kanana.
Ny taranak'i Noa (Gen. 10.1 - 11.9)
ireo firenena taranak'i Noa, ny nanaparitahan'Andriamanitra azy ireo eran'izao tontolo izao taorian'ny nanamboaran'izy ireo ny Tilikambon'i Babela.
Ny taranak'i Sema (11.10 - 26)
Ny Tantaran'ireo Patriarkan'i Israely (Gen. 12-50)
Ny tantaran'i Tera sy i Abrahama (Gen. 11.27 - 25.11)
Ny tantaran'i Ismaela (Gen. 25.12 - 18)
Ny tantaran'i Isaka (Gen. 25.19 - 35.29)
Zanak'i Abrahama sy i Saraha sady rahalahy tsy iray reny amin'i Ismaela i Isaka. Nanambady an'i Rebeka izy ka niteraka an'i Esao sy i Jakoba. Nanohy ny fivavahan-drainy amin'Andriamanitra tokana izy sady nampita izany tamin'ireo zanany koa, indrindra tamin'i Jakoba. Niampita taminy ny tsodrano azon'i Abrahama sy ny fampanantenan'Andriamanitra ny tany Kanaana ho an'ny taranany koa izy.
Ny tantaran'i Esao (Gen. 36.1 - 43)
Ny tantaran'i Jakoba sy ny zananilahy Josefa (Gen. 37.1- 50)
Boky hafa isan'ny Pentateoka:
I Amona dia fanjakana na firenena tamin'ny Andro Taloha tao Atsinanana Akaiky teo anelanelan'ny tany efitr'i Siria sy ny ony Jordana. Ny vahoak'i Amona dia atao hoe Amonita. Araka ny voalaza ao amin'ny Bokin'ny Genesisy (Gen. 19.38) dia taranak'i Bena Amy zanak'i Lota no sady havana akaikin'ny Moabita.
I Edena na ny Saha Edena dia toeram-piadanana teto ambonin'ny tany nametrahan'Andriamanitra ny olombelona voalohany (dia i Adama sy i Eva) izay voalaza ao amin'ny Baiboly. Ny Bokin'ny Genesisy (toko faha-2 sy faha-3) no ahitana io tantara io.
Ny Famoronana dia ilay asan' Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny nampisy izao rehetra izao tany am-boalohany. Tantara miendrika angano (fedrà) ao amin'ny bokim-pivavahan'ny Jodaisma sy ny Kristianisma izany, dia ny Bokin'ny Genesisy (na Jenezy). Ny Bokin'ny Genesisy dia maneho fa Andriamanitra no namorona izao tontolo izao avy tamin'ny tsy misy, ka nametraka ny olona ho tampon'ny asa famoronana nataony. Ao amin'ny Bokin'ny Salamo dia voalaza fa nandahatra sy nandamina an'izao tontolo izao Andriamanitra ka nampisy fifandraisana mivantana eo amin'ny zavaboary rehetra.
Indroa miantoana ny tantaran'ny Famoronana ao amin'ny toko voalohan'ny Bokin'ny Genesisy. Amin'ny fitantarana voalohany dia i Elohim, anarana iombonana amin'ny teny hebreo lasa anaran-tsamirery iantsoana an'Andriamanitra, dia namorona ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy tao anatin'ny enina andro, avy eo niala sasatra, ary nitahy sy nanamasina ny andro fahafito. Ao amin'ny fitantarana faharoa, Andriamanitra, izay antsoina amin'ny anarana hoe Iahveh, dia namorona an'i Adama, ilay lehilahy voalohany, avy amin'ny vovo-tany sady nametraka azy tao amin'ny Saha Edena, izay nanaovany azy ho manam-pahefana amin'ny biby rehetra. Noforonina avy amin'i Adama i Eva, ilay vehivavy voalohany sady "mpanampy" ho an'i Adama.
Ny fivavahana katolika dia mihevitra ny olombelona ho taratry ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony hihary ny zavaboary ary mandray anjara amin'ny zavaboary koa ny olombelona.
I Gomora dia tanàna kananita taloha voalaza ao amin'ny Baiboly izay nodoran'Andriamanitra niaraka amin'ny tananan'i Sodoma tamin'ny afo sy ny solifara noho ny fahotana mihoapampana nataon'ireo mponina ao, araka ny voalaza ao amin'ny Bokin'ny Genesisy (Gen. 18.20-21). Araka ny Baiboly, io tanàna io dia niorina tao akaikin'ny Ranomasina Maty. Tanàna mifanakaiky i Sodoma sy i Gomora sy i Adma sy i Zoara (na Tsoara) ary i Zeboima (na Tseboima).
I Sodoma dia tanàna kananita taloha izay voatonona miaraka amin'ny tanana hafa atao hoe Gomora izay voaresaka ao amin'ny Baiboly, izay noravan'Andriamanitra tamin'ny fandatsahana afo sy solifara araka ny voalaza ao amin'ny Bokin'ny Genesisy (Gen. 18 sy 19) tokony ho tamin'ny taonjato faha-19 tal. J.K. Misy tanàna hafa koa izay nifanakaiky tamin'izy ireo, dia i Adma sy i Tseboima (na Zeboima) ary i Tsoara (na Zoara). Nodoran'Adriamanitra ireo tanàna ireo noho ny hadalan'ny filan'ny nofon'ny mponina tao. I Lota sy ny zanany no sisa velona fa afa-nandositra niala ny tanàna.
Ny Baiboly dia milaza fa tao atsimon'ny Ranomasina Maty no nisy an'i Sodoma, tao amin'ny misy an'i Jordania ankehitriny, tokony manoloana ny mandan'i Masada.
Ny Tilikambon'i Babela na Tilikambo tao Babela, araka ny Baiboly, dia tilikambo avo dia avo nataon'ny olombelona mba hanakarana ny lanitra. Ny fanamboarana an'io tilikambo io dia tsy nahafaly an'Andriamanitra ka nahatonga azy nanamaro ny fitenin'ny olombelona mba tsy hifankahazoany sady hampitsahatra ny fanamboarana ilay tilikambo no hampiparitaka ny olombelona manerana ny tany. Amin'ny teny hebreo dia atao hoe Migdal Babel ny anaran'io tilikambo io. Ao amin'ny Bokin'ny Genesisy (Gen. 11.1-9) no ahitana ny tantara momba an'ilay tilikambo.